Myanmar 18 Plus: “မောတော့ မောတာပေါ့.. ဒါပေမယ့်..”
“မောတော့ မောတာပေါ့.. ဒါပေမယ့်..”
တင်းးးး… တောင်…. တင်းးးး… တောင်….“မော လာ လား မောင်..”“၀ှီးးးး.. ဒီလိုပါပဲ ကွာ.. မောတော့ မောတာပေါ့..”“မောင့်.. အွန့်.. သံပုရာ ရည် အေးအေးလေး..”“ဟဟ.. သံပုရာသီး နောက်တစ်လုံး မှည့်သွားပြီလား..”“မောင် နော်.. ဟွန့်..”“ဟုတ်တယ်လေ
ကွာ.. မိန်းမပဲ ပြောတာလေ.. သံပုရာသီး မှည့်သွားမှ ဒါမျိုး သောက်ရမယ် ဆို..
မမှည့်မချင်းက အလုံးလိုက် ဘောလောမြော သံပုရာရည်.. ဟဲဟဲ..”“ကြည့်ပါလား.. ပြောလေ ကဲလေ..”“နောက်တာပါ ကွယ်.. မောင့်အတွက်က မိန်းမ လက်နဲ့ ထိရင် အကုန် ကောင်းးး..”“ပြီးရော နော်.. အာ့ဆို လက်နဲ့ပဲ ထိ ပေးတော့မယ်.. ဟွန်းးး..”“အာ အာ.. ဒါ တော့ ပါဝူးလေ ကွာ.. ဒါကတော့ ဒါလေးနဲ့မှပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား..”“တော် ပါ.. ပြီးတော့ဖြင့် သူပဲ မျက်ဖြူ စိုက်..”“တစ်ခါလေးပါ ကွာ.. အဲ့နေ့က အရမ်းလည်း ပင်ပန်းလာလို့ပါ..”“ကဲပါ ခဏ နား.. ပြီးရင် ရေမိုးချိုး..”“ဘာ ဟင်းလဲ ကွ.. ဒီည..”“ကန်စွန်းရွက်ကြော်လေ.. အော်ဂန်းနစ် စစ်စစ်..”“ဟမ်.. မိန်းမ.. မဟုတ်မှလွဲရော..”
“အင်းလေ.. စားဘို့ စိုက်တာပဲ မောင် ရဲ့.. ဟုတ်ဘူးလား..”“မောင့် အပင်လေးတွေ အပျိုတောင် မဖြစ်သေးပါဘူး မွန်းရယ်.. ထပ် မခူးပါနဲ့အုန်းကွာ နော်..”“အော်.. ဘာဖြစ်လဲ.. မောင်ကလည်း.. များများ ခူးပေးမှ မြန်မြန် ကြီးလာမှာ..”“ကြံကြံဖန်ဖန် မိန်းမရယ်..”“ကဲပါ.. ရေသွားချိုး.. ဒီနေ့ ညစာက ရှယ်နော်.. မောင့်အတွက် ထမင်းမြိန်ဆေး ပါတယ်..”“ထမင်းမြိန်ဆေး ကန်စွန်းမဒန်းကြော်.. ဟွမ်းး..”“အမယ်.. သိဖြင့် မသိဘဲ.. မောင့် ကန်စွန်းမဒန်းက တကယ်တမ်း အမြည်း အဆင့်ပဲရှိတာ..”“၀ိုးးး..
မောင့်တွက် သောက်စရာ စီစဉ်ထားတယ်လား မိန်းမ.. ၀ယ်လာတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး..
ထုံးစံအတိုင်း ဆရာ စွန့်ကျဲလိုက်တာဖြစ်မယ်.. ဟုတ်တယ် ဟုတ်..”“ဟုတ်ပါ့..
၀ါ ရှောင်မလို့တဲ့ မောင်ရေ့.. ဘယ်နှရက် ခံမလဲတော့ မသိဘူး.. ကိုယ့်ဆရာအကြောင်း ကိုယ် သိနေတော့လည်း သာဓု တော့ ကြိုတင် ခေါ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်.. သာဓု နှစ်ကြိမ် နဲ့ သာ တစ်လုံး.. ခိခိ..”“အွန်း..
ထားပါတော့ ဒါက ဆရာ့ အပိုင်း.. မောင့်မိန်းမကရော.. ဘာတွေ စိတ်ကူးပေါက်လို့ မောင့် တိုက်မယ် ကြံ သတုန်း.. ခါတိုင်းဆို စီးကရက် တစ်တောင့်လောက် ရရင်တောင် ဈေးကြီး တံဆိပ်မို့လို့ ဆိုပြီး ဆိုင် ပြန် ပြန် သွင်းနေတာ.. ခုကျမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း..”“စီးကရက်က လုံးဝ ရှောင်စေ့ချင်လို့ပါ မောင်ရဲ့.. ဆေးလိပ်စွဲရင် မော မခံနိုင်ဘူး.. ဒါက ကျ မောင့်ကို အစောတလျင် အားရှိ စေချင်လို့.. ခိခိ..”“ဟဟ.. ငါ့မိန်းမတော့ လုပ်ပြီ.. မောင် မူးရင် သွေးဆိုးတာ မသိတာ ကျ..”“အွန်းလေ.. ဆိုးစေ ချင်လို့ပဲ ဟာ..”“အေး နော်.. ပြီးမှ မငိုကြေး..”“အင်းပါ.. မောင်လည်း မော ပြီ မပြောကြေး.. ခိ ခိ ခိ..”“ရေချိုးခန်းထဲ လိုက်ခဲ့ကွာ မွန်း..”“အာ.. အကျီတွေစို ကုန်မှာပေါ့..”“စိုမှာကြောက် ချွတ်ခဲ့ပေါ့..”“အွန်..”“လာစမ်းပါ ကွာ.. မိန်းမနဲ့ ရေတူတူ မချိုးရတာ ကြာနေပြီ..”“ခုတင် ချိုးပြီး နေဘီ့ ဟာ..”“ညစ်တီး ညစ်ပတ် လုပ်လိုက်မယ် ယေ.. ပြန် ချိုးပေါ့ ပီးကျ..”“မောင် နော်.. ဟွန့်..”
ဟွန့် တာက နောက် ထား။ စောက်ခေါင်းထဲ တွန့်သွားတာက အရင်။ အမှန်ပြောရရင် ကျမက
အိပ်ရာထဲ ထက် ခုလို ပေါက်ကရ နေရာမှာ လုပ်ရတာ ပျော်တယ် ရှင့်။ ဖြစ်ချင်တော့
မောင့်ရဲ့ ဆရာ တစ်ယောက်က အလုပ် တာဝန်နဲ့ နယ် ပြောင်းရတယ်လေ။ မိသားစုပါ အပါခေါ်သွားတာ။ ပိတ်ထားရမယ့် တူတူ ဆိုပြီး သူ့ အိမ်ကို ကျမတို့ လင်မယား နေဘို့ ပြောတယ်။ အလကားတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲနော်။ တိုက်ခန်း ငှားခ အတိုင်း လစာနဲ့ပေါ့။ ဒါက ကျမတို့ မျက်နှာမပူရအောင် ဆရာ စီစဉ်တာပါ။ အိမ်လေးက ဆင်ခြေဖုန်း ရပ်ကွက်။ သီးပင် စားပင်လေးတွေနဲ့ ၀န်းလေး ခြံလေးနဲ့ အသက်ရှု ချောင်ချောင်။ ဒီဈေးနဲ့ ဒီလို နေရဘို့ ဆိုတာ မလွယ်တော့ ကျမတို့လည်း အိမ်လေးကို အထူး စောင့်ရှောက်တာပေါ့။ စိုက်ပျိုးရေး ၀ါသနာ ပါတဲ့မောင်က ခြံထဲမှာ သီးပင်၊ စားပင် အစုံ စိုက်တယ်။ လက်ဆိပ်ကလည်း ရှိတော့ စိုက်သမျှ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့။ ပါရမီ ဖြည့်ဘက် ဖြစ်တဲ့ ကျမ ကတော့ သီးသမျှ၊ ပွင့်သမျှ ခူးပေးတဲ့ တာဝန် ယူထား ရတော့တာပေါ့။ မောင့် စိုက်ခင်းလေးက အိမ် မီးဖိုးချောင် စားရိတ်တော့ အတော်လေး ခု မိတာ။ တလောက ဆို ဘူးသီးတွေ ခူး မနိုင်လို့ လမ်းထိပ်က အကြော်သည်ဆီ ရောင်းလိုက်သေးတယ်။ မောင် သိတော့ ဆူတယ်လေ။ ကျမလည်း ပြန်ပြောပစ်လိုက်တယ်။ ဘူးသီးက ရှင့် မယား မို့ အလှကြည့် နေတာလား လို့။ ဒီလောက် ချစ်နေရင် ဘူးသီးနဲ့ သွားအိပ် ဆိုပြီး အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ ညစာ ဖြတ်ပစ်တာ သုံးလေးရက်။ ဒီနောက်တော့ မောင်လည်း ကျမ ခူးသမျှ သွားလေး တဖြဲဖြဲ နဲ့ မျက်စောင်းတောင် မထိုးရဲတော့ဘူး။ခြံလေးက
အပင်တွေနဲ့ အုပ်အုပ်ဖြာဖြာ ဖြစ်လာတော့ နေရတာ တကယ် ပျော်စရာ။ မောင်က ကျမ အတွက် ဘူးစင်အောက်မှာ ဒန်းကလေး လုပ်ပေးတယ်။ ပျဉ်ပြားနဲ့ သံကြိုးနဲ့ တစ်ယောက်ထိုင် လွှဲဒန်းကလေးပေါ့။ ၆ လက်မ ပတ်လည် ပျဉ်းကတိုး တိုင်ကို မြေကျင်း နက်နက် တူးပြီး အုတ်ဖိနပ်နဲ့ အခိုင်အခန့် လုပ်ထားတဲ့ ဒန်းကလေး။ သေးပေမယ့် နှစ်ယောက် ထပ် ထိုင်လို့ ကောင်းကောင်း ရတယ်။ ကျမတို့ လင်မယား အကဲ
ညီချက်၊ အဲ့ဒီ ဒန်းကလေးပေါ် ထိုင်ရင်း ချစ်ဖူးတယ်သိလား။ မောင့် ရင်ခွင်ထဲ ကျောလေးမှီပြီး ပေါင်ပေါ် တက် ထိုင်တာလေ။ အောက်က ထောင်ပေးထားတဲ့ အမြှောက်ကြီးကို တအိအိနဲ့ ဇိမ်ယူပြီး နှဲ့ ကောင်းနေတုန်း လမ်းပေါ် ဖြတ်သွားတဲ့ အသိက လှမ်းအော် နှုတ်ဆက်လို့ ပြန် လက်ပြရသေးတယ်။ အဲ့နေ့ကများ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ပြီးရတာ တစ်ချီပြီး တချီ။ ဘာဖြစ်လဲ နော့။ ကိုယ့်ခြံထဲ ကိုယ်လင် ပေါင်ပေါ် ကိုယ် ထိုင်တာပဲ ဟာ။ အောက်က ကိစ္စလည်း မရိပ်မိလောက်ပါဘူး။
ဘာလို့ဆို ကျမ ၀တ်ထားတဲ့ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်က ဖားဖား ကားကားကြီး။ အောက်က လှန်လို့ လှန်ထားမှန်း မသိနိုင်တဲ့ ပုံမျိုးလေ။ ခြံစည်းရိုး တလျှောက်ကလည်း ပုဏ္ဏရိပ် နဲ့ သနပ်ခါး ပန်းပင်တွေ ခြုံဖြစ်အောင် စိုက်ထားတော့ ဖြတ်သွားရင်း ကြည့်ရင် လင်မယားနှစ်ယောက် ဒန်းစီးနေတယ် ဆိုတဲ့ အခြေနေလောက်ပဲ မြင်ရတာပါ။ အချစ်တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေ ဆိုရင်တော့ ဒီထက် အမြင် စူးရှလောက်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းက
ကျမခြေထောက်တွေက ကား ပြီး မောင့်ခြေသလုံးကို ခြေဖမိုးနဲ့ နောက်ပြန် ချိတ်ထားတာ။ လက်နှစ်ဘက်က သံကြိုးကို အားပြုပြီး ဖင်လေး နောက် ကော့ ထား။ မောင်က အောက်ကနေ ဒန်းလွှဲဘို့ အရှိန်ယူလိုက်ရင် ဖုတ်ဖုတ်ထဲ စိုက် ထားတဲ့ လီးက ကော့သွင်းသလို ဖြစ်ပြီး တစ်ဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ စူး နေရော။ ကောင်း မှ ကောင်း။ စောက်ခေါင်းထဲ လီးအတောင့်လိုက် သပ် သွင်း ပြီး ဒန်းစီးတာလေ။ ဒန်းကို အရှိန်ပြင်းပြင်း လွှဲ လိုက်ရင် လူရော ဖုတ်ဖုတ်ရော လေထဲမှာ လှပ် ကနဲ၊ လှပ် ကနဲ။ ဖင်ကလေးကို လှုပ်စိလှုပ်စိ လုပ်ပြီး ဇိမ်ယူ ရင်းနဲ့ ကောင်းကင်က တိမ်တွေကို မော့ကြည့်။ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ရတဲ့ ဖီးလ်က ဟို ကြော်ငြာလိုပေါ့။ ဘယ်လို ပြောရမလဲ… ဆိုတော့…။ လမ်းသွား လမ်းလာတွေ ရိပ်မိကုန်မှာလည်း ကြောက်ရသေးလေ။ ကြံကြံဖန်ဖန် အရသာ မို့လား မသိဘူး ပြီးမယ်
ကြံလိုက်၊ အစ ပြန်ရောက် သွားလိုက်နဲ့ ခံစားလို့ကို မ၀ နိုင်ဘူးရယ်။ ထားပါ။
ဒါက ကြုံလို့ပြောပြတာ။ ခုတော့ မောင့်နောက်က ယောင်နောက် ဆံထုံးပါ၊ ညစ်တီး ညစ်ပတ်တွေ လုပ်ဘို့ လိုက်သွားပြီ ရေချိုးခန်းထဲ။ သိတယ် မှတ်လား၊ ဒါမျိုး စိန်ခေါ်လို့ကတော့ ငွေလမင်း အကြောက ခပ်ပြောင်ပြောင်ရယ်။
အိမ်ကလေးက ပျဉ်ထောင် ပေမယ့်။ ရေချိုးခန်းက အုတ်နံရံနဲ့ ကြွေပြားခင်းကပ် ဆိုတော့ တိုက်ခန်းတွေ ပုံစံပါပဲ။ ကျယ်လည်း အတော်ကျယ်တယ်။ အထဲမှာ နံရံကပ် မှန် တစ်ချပ်နဲ့ ဘေစင် ခုံလည်း ပါသေးတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်လေး ကုတင်ပေါ် ချွတ် တင်ခဲ့ပြီ။ ရေချိုးခန်းထဲရောက်နှင့်နေတဲ့ လင်တော်မောင်ကလည်း စိန်ခေါ်သူ ပီပီ နတ်ဝတ်ပုဆိုး တိမ် မီးခိုးနဲ့ ယောက်ျား ဘ သားပေါ့လေ။ ကျမ ပခုံးကို ဆုပ် ကိုင်ပြီး နံရံဘက် တွန်း ကပ် လိုက်တယ်။ ဆံညှပ် ကလစ်ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ကျမ ဆံပင်တွေ ဖြည် ချတယ်။ တခါက အာ့လို ကလစ်တပ် ထားတော့ နံရံကို အကပ်မှာ ကျမ ခေါင်း နာ သွားဖူးတယ်လေ။ မောင်က အာ့လိုလေးတွေထိ အသေးစိတ် မှတ်ထားပေးတတ်တယ်။ ကျမ နောက်စေ့ကို သူ့လက်နဲ့ အုပ်ကိုင် ပြီးမှ ခေါင်းကို နံရံထိအောင် ဖိ ကပ်လိုက်ရော။ ပြီးတော့ ကျမ နို့တွေကို သူ့ ရင်အုပ်ကြီးနဲ့ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ပွတ်တော့တာပဲ။ ဆီးခုံပေါ် လှိမ့်နေတဲ့ အဓိက မင်းသားကြီးကတော့ နှစ်ပါးသွား မက ခင် မင်းသမီးလေးကို ငိုအောင် စ နေတယ်။နမ်းစေချင်လို့
ဟ စိစိ လေး လုပ်ပေးထားတဲ့ ကျမ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖူးးး ဆို လေနဲ့ မှုတ်ထုတ်တယ်။ ကျမကို အသည်းယားအောင် လုပ်နေတာလေ။ ကျမက မောင့် အနမ်းတွေကို အရမ်း ကြိုက်တယ်။ တခါတုန်းကဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အနမ်းတွေနဲ့တင် ကျမ ပြီးသွားဖူးတယ်။ တအင်းအင်းနဲ့ အားယူပြီး ကျမကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားပြီး နမ်းတာလေ။ ဒီလို ချစ်ပွဲ ၀င်ကြရင် မောင့် အားယူသံတွေက ကျမကို သွေးဆူစေတာ အရမ်းပဲ။ ကျမရဲ့ မောင်က အရမ်း ထန်လာပြီဆိုရင် လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြုတ်ထွက်မတတ် စုပ် ပြီး နမ်းတာ။ ဘယ်လောက်ပဲ အကြမ်း ကြိုက်ကြိုက် ကျမ စရိုက်ကလည်း အညှာ အလွယ်သား။ တကယ် လိုချင်လာရင် အနမ်းနဲ့တင် ထွန့်ထွန့် လူးနေရော။ ခုလည်း မောင် ကျမကို အနမ်း မုဒိန်း ကျင့်နေပြန်ပြီ။ ကျမလည်း မောင့် ကျောကုန်းကြီးကို လက်သည်းနဲ့ ကုတ် ခြစ်ပြီး တောင့် ခံနေလိုက်တယ်။ နံရံမှာ ပြားကပ်နေရလို့ ကျောတွေက အေး စက်။ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးနဲ့ ဖိ ပွတ်ခံနေရလို့ နို့ နှစ်ဘက်က ထူပူ ရဲတွတ်။ ဖုတ်ဖုတ်လေး ကော့ပြီး မင်းသားကြီး ကို မိလိုမိငြား အားထုတ်ကြည့်တာ မရပါဘူး။ ကိုလူလည်က ကျမ ကော့လိုက်ရင် သူ ဖင်ကို မသိမသာ နောက် ဆုတ်ပစ်တယ်လေ။ မောင် အစုတ်ပလုတ်လေး၊ စောက်ကျင့်ကို ယုတ်တယ် လို့ ဆဲပစ်ချင်တာ ပါးစပ်ကလည်း မုဒိန်းကျင့် ခံနေရလို့ ဆဲ မအားဘူး။ စိတ်ထဲပဲ ကျိတ် ကြိမ်းနေရတယ်။ နေနှင့်ဦးပေါ့ ယောင်္ကျားရယ်။ ကျမ ပေါင်တစ်ဘက်ကို ဆွဲမ တယ်။ ပြီးတော့ ဘေစင် ခုံဘက် တွန်းပို့ ပြီး ဖင်ကလေး မှေးတင်လိုက်ရော။ ဒါဆို မောင် ကျမကို ရှေ့တည့်တည့်ကနေ ဆောင့်သွင်း တော့မယ်ပေါ့။ ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ ကြွေခုံပေါ် လက်ထောက် ပြီး ကုန်းပေး ခိုင်းတယ်လေ။ ပေါင်ကားပြီး ခါးလေး နှိမ့်၊ ဖင်လေး နောက်ပစ် ပေးထားတဲ့ ကျမကို နောက်ကနေ ဆောင့် သွင်းတာ အီစိမ့်နေရာ။ ခုတော့ နောက်တစ်မျိုး စတိုင်သစ် ထင်ပါရဲ့။ တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ကျမလင်။ ကျမ စရိုက်ကလည်း လင်မယားချင်းတောင်မှ သိပ် အတင်စီး ခံချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်မှာ ထမိန်လျှော်ချင်တဲ့ မိန်းမ ဆိုတော့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဘေစင်ပေါ် ဖင်မှေး၊ ပေါင်နှစ်ဘက် ကား ပေးပြီး အကျအန နေရာယူလိုက်တယ်။ ဒါမျိုးဆိုတာ တက်ညီလက်ညီ ဖြစ်မှ ကောင်းတာ မဟုတ်လား။မျက်နှာချင်း
ဆိုင်ပြီး နှစ်ယောက်သား စိန်ခေါ်ကြည့်နဲ့ အပြန်လှန် ကြည့်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ အပြာကားတွေ ထဲက သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ညှို့ အကြည့်မျိုး။ ကျမကတော့ အံကျိတ်ပြပြီး
မျက်စောင်း ထိုးပစ်တာပဲ။ မောင် မကြာခဏ ပြောတတ်တာတော့ ကြာ ကြည့်လေး ကြည့်ပါဦး ဆိုလားဘာလား။ ဟုတ်တယ်လေ။ လင်နဲ့ မယား လိုးတာ ကြာ ကြည့်တွေ၊ အညုတွေ၊ အချွဲတွေ လိုလား ကဲ။ ဒီလီးနဲ့ ဒီအဖုတ်၊ မလုပ်ဖူးတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ အပိုတွေ ဟန်ရေးပြနေရင် စိတ်ကို မရှည်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း လင်တော်မောင်က ခြေဆင်း နဲ့ ဇာတ် ဆင်နေတော့လည်း ကျမ ငွေလမင်း၊ ဖုတ်ဖုတ်က တောက်တောက် ယိုနေသည့်တိုင် စိတ်ကို ရှည်ရှည်ထား စောင့်ပေး နေရတာပေါ့လေ။ နေရာယူလို့ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ပွတ်ကြ သပ်ကြ နမ်းကြ စုပ်ကြ ပေါ့ရှင်။ ဒါက ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမနဲ့ မလိုးခင် အပျိုးဝင် ကြတဲ့ ထုံးစံတွေ။ ဆိုတော့ကာ ဒါတွေ ပြောနေလို့ ကြာတာပဲ ရှိမှာ။
“မောင် ကွာ.. စိတ် မရှည်တော့ဘူး..”“ဟ ဟ..”“ရှီးး.. အင်းးး.. ထဲ့ တော့ လို့ ဆို နေ ပွတ် နေရလား လို့.. ဟင့်..”“တစ်ခေါက် ပီး ပေး ကွာ.. မိန်းမ ပီးတာလေး ကြည့်ချင်တယ်..”“ဟင့်.. လူယုတ်မာလေး.. သေ သတ် နေတယ် လူကို..”“အေးဆေးပေါ့ မိန်းမကလည်း..”“အထဲက တအား ယားနေဘီ.. မောင်ရဲ့.. မထိ တထိနဲ့..”“အင်းလေ မွန်း ရယ်.. မထိ တထိလေးနဲ့ ပီးလိုက် တစ်ခေါက်..”“ရှီးး.. အ.. အစုတ်ပလုတ် ယောင်္ကျား.. ညှင်း ဆဲ နေတယ်.. ဟင့်..”“သိလား မွန်း.. မွန်း အဖုတ်လေးကလေ..”“သိဘူးအေ.. ဟင့်”“မောင့် လီး ထိပ်ကို နမ်း နေတယ် ကွ.. မွ မွ ဆိုပြီး..”“အာာာာ.. လူ ဆိုး.. အစုတ်ပလုတ် ယောင်္ကျား.. ရှီးး..”“ကျန်း.. ချွဲ ကျိကျိနဲ့.. လီးထိပ်မှာ..”“ဆောင့်ပေး လို့ မောင့်..”“နာ သွားမှာပေါ့..”“နာ ပေ့စေ ကွာ..”“ပြဲ သွား ရင် ရော..”“ပြဲ ပြဲ ဟယ်.. စပ်မြင့် ကတ်လာပြီ.. လုပ်ပါ ဆိုနေ..”“အာ.. ရော့ ကွာ..”“အိုးး.. ဟိုးး.. မောင် ရေ့..”ဆွ
နေတုန်းက အကြာကြီးလေ။ လုပ်မယ့်လုပ်တော့ ဆောင့်ထိုး ထည့် တာ တစ်ချက်တည်း။ ကျမ ပြီး သွားတယ်။ မောင့် လီးကြီးကတော့ အထဲမှာ အတောင့်လိုက်ကြီး တစ် နေတုန်းပေါ့။ စိတ်ထဲ ရှိတာပြောကြေးဆို ကျမ အားမရသေးဘူး။ ကျမ အကြိုက်က စိတ်ကုန်လက်ကုန် နာ ကျင်ပြီး ပြီးရမှလေ။ မထိတထိ ရွစိစိလေးတွေ သိပ် ခံတွင်းမတွေ့ဘူး။ ခုလည်း လင်တော်မောင်က ဒါကို သိလို့ တမင် ကျမကို ဆွ တာ။ သူလည်း မပြီးသေးဘူး ကျမ သိတာပေါ့။ မောင့် အကျင့်က တစ်မျိုး။ ကျမ သူ့ကြောင့်
ခဏခဏ ပြီးရတာကို အရသာ ခံချင်တာလေ။ အိမ်ထောင်သက်လေး ရလာတော့ ပို ဆိုးတယ်။ စတန့် ထွင်ချင်လာတာလည်း ပါမှာပေါ့။ လင်မယား လိုးနေရင်း ဟိုပြောဒီပြောကလည်း ပြောသေးတာ။ အထူး သဖြင့် သူပြောတတ်တာ သူ့ ရည်းစားဟောင်းတွေ အကြောင်း။ ဘယ်ရည်းစားကို ဘယ်လို ကိုင်ခဲ့ နှိုက်ခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ ကျမကို ပြောပြတယ်။ ကျမလည်း
ကြားကြားချင်းတော့ ဒေါသ ထွက်တာပေါ့။ ကိုယ့်ကို လုပ် နေရင်းများ အဆက်ဟောင်းကို တ ရလား ဆိုပြီးလေ။ ကျမလည်း မောင်နဲ့ မတွေ့ခင် ရည်းစား ထားခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒီ အဆင့်ထိတော့ မရောက်ခဲ့ယိုး အမှန်ပါ။ ဒါကို မောင်လည်း သိနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မောင့်ရဲ့ အဆက်ဟောင်း ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားရဖန် များလာတော့ ကျမ ကိုယ့်လင်ကိုယ် မခံချင် ဖြစ်လာတယ်။ မခံချင် ဆိုတာ ဟိုကိစ္စကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ရက်ကျတော့ ကျမ ပြန်ပြောပစ်လိုက်တယ်။ ငါ လည်း အဆက်ဟောင်း နဲ့ ခံခဲ့ မိရင်ကောင်းမှာ ဆိုပြီး။ အဲ့ဒီမှာ ကျေးဇူးရှင်က စိတ် မဆိုးတဲ့အပြင် ကျမကို စကားတောင် ထောက်ပေးနေသေးပါ့ရော။ ဘယ်လို ခံချင်တာလဲ။ နို့လေး စို့ ခံချင်တာလား။ အဖုတ်လေး ပွတ်ယုံလား။ ကျောင်းခန်းလွတ်ထဲ ၀င်ပြီး
ကျိတ်လိုးလေး လိုးခံချင်တာလား။ ကျမကို မေးတာ အစုံ အစုံ။ ကျမလည်း စောက်မြင်
ကတ်ကတ်နဲ့ သူ ပြောသမျှ ဂွ တိုက် တော့တာပေါ့။ ကိုယ်တော်ချောက စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် အားရ နေတဲ့ ရုပ်ကြီးနဲ့လေ။ ဒါတွေပြောပြီး လုပ်ရတာ ပို ဖီးလ် တယ် ဆိုပဲ။ နောက်ဆုံးများဆို ခုနေ သူ လာ လိုးရင် ခံမှာလား မိန်းမ ဆိုတာက ပါသေး။ကျမဘက်က ဖီလင်လား။ အင်းးး.. ပြောရရင် ထူးဆန်းတာပေါ့။ ကိုယ့်လင် တစ်ယောက်လုံးက ဒီစကားတွေ ပြောနေတော့ စိတ်ထဲ သက်တောင့်သက်သာ မရှိတာလည်း အမှန်။ မညားလိုက်ရတဲ့ ရည်းစားဟောင်း မျက်နှာကြီး ပြန် မြင်မိတာလည်း အမှန်ပဲရှင့်။ ဒီထက်တော့ ပို မတွေးမိပါဘူး။ ဒီအာသီသက စောက်ခေါင်းထဲက အရည်ကုန်ရင် ပျောက်သွားရော။ နောက်တစ်ခု ထူးဆန်းတာ ရှိသေးတယ်။ ကျမ ကိုယ်တိုင်လည်း မောင် ပြောပြောနေတဲ့ အဆက်ဟောင်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ နားထောင် ရရင် ဖီးလ် ပို ကောင်းလာတတ်တယ်။ စိတ်ထဲ တွေးမိတာ အခု ငါ့ကို လိုးနေတဲ့ လီးကြီးက ဘယ်တုန်းက ဘယ်ကောင်မလေးကို ဘယ်လို လိုးခဲ့တာပေါ့လေ။ ခုတော့ ဒါကြီးကို ငါ ပိုင်နေပြီပေါ့။ အူမတိုနဲ့ အပြင် စိုလာတာ ပိုသေး။ တစ်ခါများဆို လင်မယားနှစ်ယောက် ထွင်ကြတာ သူက ကျမ အဆက်ဟောင်းလို သရုပ်ဆောင်၊ ကျမက သူ့ ရည်းစားဟောင်းတွေထဲက တစ်ယောက် ပုံစံလုပ်။ ဇာတ်ကြောင်းလေး တပြောပြောနဲ့ ဆွဲ ကြတာ မိုးအလင်းလုနီးပါးပဲ။ အခုလည်း လင်တော်မောင် ဇာတ်ညွှန်းဆရာကြီးက တစ်ချီ ပြီးသွားတဲ့ ကျမ ကို ဇာတ်လမ်း လုပ်ဘို့ ကြံစည်နေပြန်ဘီ။ “မောင် မော သွားပြီ.. မွန်း ဘဲဘဲ ခေါ်လိုက်ကွာ.. သူ့ကို လိုး ခိုင်း.. မောင် ဘေးက ကြည့်မယ်..” ပြောပြီး သူ့ဟာကြီးကို ဆွဲ ထုတ်တယ်။ ကျမ အဖုတ်လေး ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့။ ခုနေ တော်ပြီ ရေချိုးတော့လို့ ပြောလိုက်ရင် ကောင်းမလား။ မောင့်ကို ရွဲ့ ပြီးလေ။ ကျမက တစ်ခါ ပြီးထားနှင့်ပြီ မှတ်လား။ စိတ်က ဒီလို တွေးမိပေမယ့် ပါးစပ်ကတော့
ယောင်နောက် ဆံထုံး ပါ မိပြန်ရောလေ။ တကယ်က ကျမ မ၀ သေးတာထက် မောင့်ခမြာ တောင် နေရှာတုန်းမို့ပါနော်။“ဘဲဘဲက အိပ်ရာထဲက စောင့်နေတယ်.. မောင် ကိုယ်တိုင် လိုက် ပို့..”“အွန်.. ဒီ ခေါ် ဘူးလား..”“ဟေ့အေး.. အိပ်ရာထဲ သွားမယ်.. သူ့ကို အောက်က လုပ် ခိုင်း.. မောင်က နို့တွေ ချေ ပေး..”အားရပါးရ
ပြောလိုက်တယ်။ မှတ်ကရောပဲ။ လင်တော်မောင် မျက်နှာက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဒီလောက် အစမ်းထွင်၊ ရွ ချင်တဲ့ ယောင်္ကျား မတရားကို ခိုင်းစား ပစ်ဦးမှာ။ ကျမ ကို ပွေ့ချီပြီး ငုံ့နမ်း လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ညောင်နာနာ မျက်နှာပေးနဲ့ ပြောပုံက.. “အရောက် ပို့ပါ့မယ် ဗျာ.. မောင့်မယားလေးကို ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ့်သူဆီ မောင် ကိုယ်တိုင် အရောက် ပို့ပါ့မယ်..” ခိခိခိ။ ကိုယ့် အရပ်နဲ့ ကိုယ့် ဇာတ်တော့ အံကို ကျ လို့ရယ်။ ကျမ စိတ်ထဲ ရယ်ချင်ပက်ကျိ။ ဖုတ်ဖုတ် ကလေးထဲကလည်း နောက်တချီ အတွက် ပျို့ တက်လာတဲ့ ဂျယ်လီရည်တွေက ချွဲ ကျိကျိ။ ဒီလိုနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် အိပ်ရာပေါ် ရောက်။ ကျမက ပက်လက်ကလေး လှန် လို့။ ဒူးထောင် ပေါင်ကားရင်း မောင့်မျက်နှာကို ကြည့်။ စိတ်ထဲ တကယ်ပဲ ငါ့ အဆက်ဟောင်း ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်တယ်။ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း စိတ်ကလေးက ၀င်လာတယ်လေ။ ဟိုးတုန်းက ငါ့ကို မလိုးခဲ့ရတဲ့သူ အခု ငါ့ရှေ့ ရောက်နေပါလား ပေါ့။ တစ်ဆက်တည်း စိတ်ထဲ အားနာစိတ်က ၀င်လာ။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ခံ တော့မယ် ငါ့ကို ငါ့လင် ကိုယ်တိုင် ထိုင်ကြည့် နေမှာပါလား ဆိုပြီး။ ကျမ ပေါင်ကြားမှာ နေရာ ယူလိုက်တဲ့ ရည်းစားဟောင်း တဖြစ်လဲ မောင်က သူ့ အချောင်းကြီးကို တဆတ်ဆတ် လှုပ်ပြီး ဇာတ်လမ်း ပြန် စ တယ်။ “ဘယ်လိုလဲ မိန်းမ.. မိန်းမ ဘဲဘဲ ဟာကြီးက ကြည့်ကောင်းလား..”“အွန်း..”“ဘယ်လိုကြီးလဲ ပြော ကွာ..”“ညိုညို အတံကြီးပေါ့ မောင် ရဲ့.. သိဘူးဟယ် ပြောတတ်ဘူး..”“ရှက် မနေပါနဲ့ မိန်းမရဲ့.. မောင် တစ်ယောက်လုံး အနားမှာ ရှိတာပဲ ဟာ..”“တော် ဘီ ကွာ.. မောင့်.. လုပ်တော့..”“မောင် လုပ် ဘူးလေ.. ဘဲဘဲကို ခိုင်းလေ မွန်း ရဲ့.. ရှက်မနေနဲ့ မောင် ခွင့်ပြုတယ်..”“ဟင့်.. မောင် က လည်း..”“လုပ်ပါ မွန်းလေးရဲ့.. စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခံစား ပစ်လိုက်..”“အာာ.. ရှီးးး..”“လိုးနေ ပြီလား.. မိန်းမ..”“အင်.. ဟင့်.. ဟင့်အင်း..”“အယ်.. ဒီကောင် ဘာကောင်လဲ.. မောင့်မိန်းမကို မလိုးပေးသေးဘဲ ညှင်း နေလား ဟုတ်လား..”“အင်း..”“ဘာ လုပ်နေလဲ ခု.. ပြော ကွာ မွန်း..”“သူ့.. ဟိုလေ..”“အင်း.. ပြော..”“ဟို.. မွန်း.. အဖုတ်ကို သူ့ ဟိုဒင်းကြီးနဲ့ တေ့ ပြီးတော့..”“တေ့ ပြီးတော့ ဘာ လုပ်လဲ..”“ပွတ် ဆွဲ နေတယ်..”“ဘာ ကြီးနဲ့လဲ..”“ကျွတ်.. မောင် ကွာ..”“ပြောပါ မွန်း ရဲ့.. မရှက်နဲ့..”“သူ့ လီး နဲ့ ဟယ်.. ကဲ.. ရှီးးး.. အင်းး..”“အွမ်းးး… ကောင်း လား မိန်းမ.. မိန်းမ စောက်ဖုတ်ကို သူ့လီးကြီးနဲ့ ပွတ် ဆွဲ ပေးနေတာ ကောင်းလား..”“အင်း.. မောင်ရယ်.. ကောင်းတယ်.. အရမ်း..” “အင်းး.. မောင်လည်း ကောင်းတယ်.. မောင့်မိန်းမ ကောင်းနေတာ ကြည့်ပြီး..”“လုပ် ပါ.. လုပ်တော့ ကွာ.. ထိုးထည့်ပေး..”“ခိုင်းလိုက်လေ.. ဘဲဘဲကို ပြောလိုက်.. မောင် ကြည့်နေမယ် ပြောလိုက်..”“အိုးးး... ဟို့ ဟိုးး… လုပ်.. လုပ်ပါတော့.. မွန်းကို လိုးပေးပါတော့ ဟယ်..”“အင်းး..”“အင်းး.. ဟင့်.. မောင် ရေ..”“လိုးနေ ပြီလား.. မိန်းမာ့.. မိန်းမာ့.. မောင့်မိန်းမလေး အလိုးခံနေရပြီလား ဟုတ်လား..”“အင်းး.. မောင် ရယ်.. အရမ်း..”“မောင်က နို့လေးတွေ ချေပေးမယ်..”“အင်း.. နာနာလေး..”“…….”“…….”အပြန်လှန်
ပြောကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းလည်း အဆုံး၊ ကျမ အဖုတ်လေးလည်း စိစိညက်ညက်ကြေ။ လင်တော်မောင်လည်း လရေတွေ တပြွတ်ပြွတ် ပန်းထည့်။ ကျမ ကိုယ်ပေါ် မှောက်ချပြီး အားရပါးရ အမော ဖြေနေလိုက်တာ တဟဲဟဲ အသက်ရှုသံတွေ ညံလို့။ သူ့ တကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ သံတွေ ရွှဲနစ်လို့ပေါ့။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ပညာပြသွားတဲ့ အတံကြီးလည်း အားကုန်လို့ မာန်ကျ သွားပြီ။ မောင့်ကို ဖက်ထားပေးရင်း နားရွက်ဖျားလေးကို ဖွဖွ ပွတ် ပေးနေလိုက်တယ်။ အောက်က ဗျော့စိကွေးကိုလည်း ရှုံ့ပွပွ လုပ်ပြီး ချော့ပေးနေမိတယ်။ တကယ်က ယောင်္ကျားတွေ အားကောင်းမောင်းသန် ဆိုတာ အလကား ရှင့်။ ခုပဲ ကြည့်လေ။ ချာတိတ်က မုန့်လက်ညှိုး ရေ စွတ် ထားသလို သာခွေယိုင် ဖြစ်ပြီး ကျင်းထဲမှာ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့။ ကျမ ညီမလေးက သူ့ကို
ကောင်းကောင်း ပွေ့ထားပြီး တပြွတ်ပြွတ် နမ်းရင်း ညှစ် ပေးနေနိုင်သေးတယ်။ ခိခိခိ။ ကိုယ့် အတွေးကိုယ် သဘောကျနေတုန်း အမော ပြေစ ပြုတဲ့ လင်တော်မောင် ကုန်း ထ တယ်။ ကျမ ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းရင်း “ရေချိုးတော့မယ်.. ဗိုက်လည်း ဆာဘီ ကွ..” တဲ့။ ကျမ လည်း မောင့်မျက်နှာကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ရင်း ……….“မော သွား ပြီလား မောင်…”“မောတော့ မောတာပေါ့.. ဒါပေမယ့်..”“အွမ့် ဟွမ်.. ဒါ ပေ မယ့်.. ?..”“ဒါပေမယ့်.. မော တယ်.. အဟီးး..” “ခိခိခိ..”“အာမွ..” “ပြွတ်..”“ရွှတ်..” “ပလွတ်..”
^v^ ^v^ ပြီးပါပြီ ^v^^v^